Arsenal Oo Loo Sheegay Qiimaha Ay Bixineyso Si Ay U Hesho Xidiga Alexander Isak
HomeWararka CiyaarahaArsenal oo loo sheegay Qiimaha ay bixineyso si ay u hesho Xidiga Alexander Isak
Arsenal ayaa lagu soo waramayaa in loo sheegay bixinta £ 60m lacagtaasi oo lagu heli karo xidiga Real Sociedad ee Alexander Isak xagaaga soo socda.
22 jirkaan ayaa isha lagu hayey u ciyaariatiisa Sweden ee Euro 2020 waxaana lala xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo kooxo badan oo Yurub ah intii lagu jiray suuqii ugu dambeeyay.
Si kastaba ha ahaatee, Isak ayaa taa bedelkeeda loo doortay inuu qalinka ku duugo heshiis cusub oo shan sano ah oo uu kula jiro Sociedad ilaa xagaaga 2026, waxaana heshiiska ku jira 70 million (£ 59.8m) oo lagu burburin karo qandaraaskiisa.
Sida laga soo xigtay AS , Sociedad diyaar uma aha inay hoos u dhigto dalabkooda Isak, taasoo la micno ah inay Arsenal ku qasban tahay inay iska fogeyso dhammaan lacagta lagu burburin karo qandaraaskiisa haddii ay dooneyso inay la saxiixato 2022.
Gunners ayaa la filayaa inay suuqa u gasho weeraryahan cusub xagaaga soo aadan iyadoo Alexandre Lacazette uu ka dhacayo heshiiskiisa, halka Pierre-Emerick Aubameyang uu dhacayo qandaraaskiisa 2023-ka.
Isak ayaa dhaliyay 17 gool 34 kulan oo La Liga ah xilli ciyaareedkii hore laakiin weli ma uusan ka soo muuqan shantii kulan ee uu saftay xilli ciyaareedka cusub, isagoo shabaqa soo taabtay hal jeer Europa League